Jọn 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
* Ihe odide ochie bụ́ Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, na akwụkwọ codex bụ́ Sinaitic Syriac edenyeghị amaokwu nke 53 ruo isi nke 8, amaokwu nke 11, bụ́ nke na-agụ (n’ụzọ dịtụgasị iche n’ihe odide Grik na nsụgharị Grik dị iche iche) otú a, sị:
53 Onye ọ bụla n’ime ha wee laa n’ụlọ ya.
8 Ma Jizọs gara n’Ugwu Oliv.
2 Otú ọ dị, mgbe chi bọrọ, ọ pụtara ọzọ n’ụlọ nsọ. Ìgwè mmadụ ahụ dum wee malite ịbịakwute ya. O wee nọdụ ala malite izi ha ihe.
3 Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii kpọtakwara otu nwaanyị e jidere ka ọ na-akwa iko, mgbe ha mere ka o guzoro n’etiti ha,
4 ha sịrị ya: “Onye Ozizi, e jidere nwaanyị a ka ọ na-akwa iko.
5 N’Iwu ahụ, Mozis nyere anyị iwu ka anyị tụọ ụmụ nwaanyị dị otú a nkume. Gịnị bụ echiche gị?”
6 Otú ọ dị, ha na-ekwu ihe a iji lee ya ule, ka ha wee nwee ihe ha ga-eji bo ya ebubo. Ma Jizọs hulatara wee jiri mkpịsị aka ya na-ede ihe n’ala.
7 Mgbe ha nọgidere na-ajụ ya ajụjụ, o hulitere wee sị ha: “Onye na-adịghị eme mmehie n’ime unu, ya buru ụzọ tụọ ya nkume.”
8 O hulatara ọzọ wee na-ede ihe n’ala.
9 Ma ndị nụrụ nke a malitere ịpụ otu otu, malite ná ndị okenye. O wee fọdụ naanị ya na nwaanyị ahụ nke nọ n’etiti ha.
10 Jizọs wee hulite, sị ya: “Nwaanyị, olee ha? Ọ́ dịghị onye ọ bụla mara gị ikpe?”
11 O wee sị: “Nna anyị ukwu, ọ dịghị.” Jizọs sịrị ya: “Mụ onwe m amaghịkwa gị ikpe. Lawa; malite ugbu a gaa n’ihu, kwụsị ịdị na-eme mmehie.”
12 Ya mere, Jizọs gwara ha okwu ọzọ, sị: “Abụ m ìhè+ nke ụwa. Onye na-eso m agaghị eje ije n’ọchịchịrị ma ọlị,+ kama ọ ga-enwe ìhè nke ndụ.”
13 N’ihi ya, ndị Farisii sịrị ya: “Ị na-agba àmà banyere onwe gị; àmà gị abụghị eziokwu.”
14 Jizọs zara ha, sị: “Ọ bụrụgodị na m na-agba àmà banyere onwe m, àmà m+ bụ eziokwu, n’ihi na amaara m ebe m si bịa na ebe m na-aga.+ Ma unu amaghị ebe m si bịa na ebe m na-aga.
15 Unu na-ekpe ikpe dị ka anụ ahụ́ si dị;+ adịghị m ekpe onye ọ bụla ikpe ma ọlị.+
16 Ma ọ bụrụgodị na mụ ekpee ikpe, ikpe m bụ ikpe eziokwu, n’ihi na anọghị m naanị m, kama Nna m nke zitere m nọnyeere m.+
17 E dekwara n’Iwu unu, sị, ‘Àmà mmadụ abụọ gbara bụ eziokwu.’+
18 Ọ bụ m na-agba àmà banyere onwe m, Nna m nke zitere m na-agbakwa àmà banyere m.”+
19 Ya mere, ha gara n’ihu ịjụ ya, sị: “Olee ebe Nna gị nọ?” Jizọs zara, sị: “Unu amaghị m, unu amaghịkwa Nna m.+ Ọ bụrụ na unu maara m, unu gaara amakwa Nna m.”+
20 O kwuru ihe ndị a n’ebe a na-edebe ego+ mgbe ọ na-ezi ihe n’ụlọ nsọ. Ma ọ dịghị onye ọ bụla jidere ya,+ n’ihi na oge awa ya+ erubeghị.
21 N’ihi ya, ọ gwara ha ọzọ, sị: “Ana m ala, unu ga-achọkwa m,+ ma unu ga-anwụ n’ime mmehie unu.+ Unu apụghị ịbịa ebe m na-aga.”
22 Ya mere, ndị Juu malitere ịsị: “Ọ̀ na-aga igbu onwe ya? N’ihi na ọ na-ekwu, sị, ‘Unu apụghị ịbịa ebe m na-aga.’”+
23 Ya mere, ọ gara n’ihu ịsị ha: “Unu si n’ebe dị n’ala; esi m n’ebe dị n’elu.+ Unu si n’ụwa a;+ esighị m n’ụwa a.+
24 Ya mere, ana m asị unu, Unu ga-anwụ n’ime mmehie unu.+ N’ihi na ọ bụrụ na unu ekweghị na ọ bụ m bụ ya, unu ga-anwụ n’ime mmehie unu.”+
25 Ya mere, ha malitere ịjụ ya, sị: “Ònye ka ị bụ?” Jizọs sịrị ha: “Gịnịdị mere m ji atụpụrụ unu ọnụ?
26 Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ekwu banyere unu nakwa ihe m ga-ekpebi ikpe na ha. N’ezie, onye zitere m bụ onye eziokwu, ihe m nụrụ n’ọnụ ya ka m na-ekwu n’ụwa.”+
27 Ha aghọtaghị na ọ na-agwa ha banyere Nna ya.
28 Ya mere, Jizọs sịrị: “Ozugbo unu buliri+ Nwa nke mmadụ+ elu, mgbe ahụ ka unu ga-amara na ọ bụ m bụ ya,+ na adịghịkwa m eme ihe ọ bụla n’uche nke aka m;+ kama m na-ekwu ihe ndị a dị nnọọ ka Nna m kụziiri m.+
29 Onye zitere m nọnyeere m; ọ hapụghị m ka m nọrọ naanị m, n’ihi na m na-eme ihe dị ya mma mgbe niile.”+
30 Ka ọ nọ na-ekwu ihe ndị a, ọtụtụ ndị nwere okwukwe n’ebe ọ nọ.+
31 Ya mere, Jizọs gara n’ihu ịgwa ndị Juu kweere na ya, sị: “Ọ bụrụ na unu anọgide n’okwu m,+ unu bụ n’ezie ndị na-eso ụzọ m,
32 unu ga-amarakwa eziokwu ahụ,+ eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu.”+
33 Ha zara ya, sị: “Anyị bụ ụmụ Ebreham,+ anyị abụtụbeghị ohu onye ọ bụla.+ Olee ihe mere i ji asị, ‘Unu ga-enwere onwe unu’?”
34 Jizọs zara ha, sị: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Onye ọ bụla nke na-eme mmehie bụ ohu nke mmehie.+
35 Ohu adịghịkwa anọ n’ezinụlọ ruo mgbe ebighị ebi; nwa na-anọ ruo mgbe ebighị ebi.+
36 Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n’ezie.+
37 Amaara m na unu bụ ụmụ Ebreham; ma unu na-achọ igbu m,+ n’ihi na okwu m adịghị arụpụta ihe ọ bụla n’etiti unu.+
38 Ihe m hụrụ n’ebe Nna m+ nọ ka m na-ekwu;+ ya mere, na-emenụ ihe unu nụrụ n’ọnụ nna unu.”
39 Ha wee zaa ya, sị: “Nna anyị bụ Ebreham.”+ Jizọs wee sị ha: “Ọ bụrụ na unu bụ ụmụ Ebreham,+ na-arụnụ ọrụ Ebreham rụrụ.
40 Ma ugbu a, unu na-achọ igbu m, bụ́ onye gwara unu eziokwu nke m nụrụ n’ọnụ Chineke.+ Ebreham emeghị otú a.+
41 Unu na-arụ ọrụ nna unu.” Ha wee sị ya: “Anyị abụghị ndị a kwatara n’iko; anyị nwere otu Nna,+ ya bụ, Chineke.”
42 Jizọs wee sị ha: “Ọ bụrụ na Chineke bụ Nna unu, unu ga-ahụ m n’anya,+ n’ihi na esi m n’ebe Chineke nọ bịa, m wee nọrọ n’ebe a.+ Abịaghịkwa m n’uche nke aka m ma ọlị, kama ọ bụ Onye ahụ zitere m.+
43 Gịnị mere na unu amaghị ihe m na-ekwu? Ọ bụ n’ihi na unu apụghị ige ntị n’okwu m.+
44 Unu sitere ná nna unu bụ́ Ekwensu,+ unu na-achọkwa ime ihe nna unu chọrọ.+ Onye ahụ bụ ogbu mmadụ mgbe ọ malitere,+ o guzosighịkwa ike n’eziokwu, n’ihi na eziokwu adịghị n’ime ya. Mgbe ọ na-ekwu okwu ụgha, ọ na-ekwu dị ka ọchịchọ ya si dị, n’ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna ụgha.+
45 N’ihi na mụ onwe m na-ekwu eziokwu, unu adịghị ekwere ihe m na-ekwu.+
46 Ònye n’ime unu na-ama m ikpe mmehie?+ Ọ bụrụ na m na-ekwu eziokwu, gịnị mere unu ekwereghị ihe m na-ekwu?
47 Onye si na Chineke na-ege ntị n’okwu Chineke.+ Ọ bụ ya mere unu adịghị ege ntị, n’ihi na unu esiteghị na Chineke.”+
48 Ndị Juu zara ya, sị: “Ọ̀ kwa anyị kwuru ekwu na ị bụ onye Sameria+ nakwa na mmụọ ọjọọ ji gị?”+
49 Jizọs zara, sị: “Mmụọ ọjọọ ejighị m, kama m na-asọpụrụ Nna m,+ unu adịghịkwa asọpụrụ m.
50 Ma adịghị m achọrọ onwe m otuto;+ ọ dị otu Onye nke na-achọ ya, nke bụkwa onyeikpe.+
51 N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-edebe okwu m, ọ gaghị anwụ ma ọlị.”+
52 Ndị Juu sịrị ya: “Ugbu a ka anyị maara na i nwere mmụọ ọjọọ.+ Ebreham nwụrụ,+ ndị amụma nwụkwara;+ ma ị na-asị, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-edebe okwu m, ọ gaghị edetụ ọnwụ ire+ ma ọlị.’
53 Ị̀ ka+ nna anyị Ebreham, bụ́ onye nwụrụnụ? Ndị amụma nwụkwara.+ Ònye ka ị na-asịdị na ị bụ?”
54 Jizọs zara, sị: “Ọ bụrụ na m na-enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na-enye m otuto,+ bụ́ onye ahụ unu na-asị na ọ bụ Chineke unu;
55 ma unu amabeghị ya.+ Ma amaara m ya.+ Ọ bụrụkwa na mụ asị na amaghị m ya, m ga-adị ka unu, wee bụrụ onye ụgha. Ma amaara m ya, ana m edebekwa okwu ya.+
56 Ebreham nna unu ji ọṅụ dị ukwuu tụọ anya ịhụ ụbọchị m,+ ọ hụkwara ya wee ṅụrịa ọṅụ.”+
57 Ya mere, ndị Juu sịrị ya: “Ị̀ na-ekwu na ị hụwo Ebreham mgbe ị na-erubeghị afọ iri ise?”
58 Jizọs sịrị ha: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Tupu a mụọ Ebreham, mụ onwe m adịrịla ndụ.”+
59 Ya mere, ha tụtụụrụ nkume ka ha tụọ ya;+ ma Jizọs zoro wee pụọ n’ụlọ nsọ ahụ.